National Power News:: एउटा गित आउदैमा आफू नै ठुलो कलाकार हु भन्ने नसोचौ ; गायिका साबित्री राना मगर National Power News:: एउटा गित आउदैमा आफू नै ठुलो कलाकार हु भन्ने नसोचौ ; गायिका साबित्री राना मगर
एउटा गित आउदैमा आफू नै ठुलो कलाकार हु भन्ने नसोचौ ; गायिका साबित्री राना मगर
काभ्रेपलान्चोक – धुलिखेल नगरपालिका वडा न ३ नयाँबस्तिमा बुवा भक्त बहादुर मगर र आमा मनमाया मगरको कोख बाट जन्मनुभएकि चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका साबित्री राना मगर आज भोलि निकै ब्यस्त देखिनु हुन्छ । छोटो समयमै निकै चर्चा बटुल्नु भएकि गायिका मगरले निकै षंघर्स र मेहनत बाट आज यहाँ सम्म आएको बताउनु भयो । प्रस्तुत छ नव क्षितिज साप्ताहिकका लागि अरबिन्द्र गौतमले गायिका साबित्री राना मगरसँग गरेको छोटो कुराकानी
० आजभोली के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
विभिन्न कार्यक्रममा, गीत संगीतको रेकर्डिङ अनि शिक्षण पेशामा व्यस्त
० तिहार कस्तो भयो ?
धेरै रमाइलो भयो । देउसीभैलो कार्यक्रममा व्यस्त भैयो ।
० पहिलेको गीत संगीत र अहिलेको गीत संगीतमा तपाईले के फरक पाउनु हुन्छ ?
पहिलेका गीत संगीत विशेषगरी लोक गीत गाउँघर, वनपाखामा मेला पर्व जात्रामा गाइने मौलिक गीत हुन्थे । तिनैलाई पछि रेकर्डिङ गरेर फेरी बजारमा उपलब्ध हुन्थे । अहिले धेरै जसो कोठामा बसी गीत संगीत तयार गरिएको हुन्छ अनि त्यसैलाई लोकगीत संगीत भनिने र मानिन पनि थालेको छ । केही चाही मौलिक लोक गीत संगीत पनि छन् अहिले पनि । पहिला धेरै हुन्थे । गीत संगीत अनि कलाकार पनि सबैको मनमुटु छुने र गाउँघरका कुना काप्चामा चली आएको भाखा लयलाई रेकर्डिङ मार्फत सार्वजनिक गरी दर्शक श्रोता माझ ल्याईन्थ्यो र कलाकारहरु मार्फत उहाँहरुको सिर्जनालाई जर्गेना गरिन्थ्यो । अहिले धेरै मात्रामा गीत संगीत बजारमा आएका छन् जुन सदाबहार र मर्मस्पर्सी हुन सकेको छैन जुन गीतको औसत
आयू १०–१५ दिन हुन्छ र कालान्तर सम्म हराएर गईरहेको छ ।
० सुरुका दिनहरुको बारेमा बताउनुहोस् गायन क्षेत्रमा कसरी लाग्नु भयो ?
शुरुका दिनहरुको बारेमा भन्नु पर्दा ०५८।०५९ साल तिर जिल्लामा
लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिता कार्यक्रमहरुमा हाम्रो संस्था सृजना कला मन्दिर बाट ३ जना प्रतिस्पर्धि गायिकाहरु छनौट गरी पठाइयो । त्यस संस्थाको अध्यक्ष म आफै थिए । पछि १ जना गायिका सहभागि नहुने भए पश्चात म आफै उक्त लोक दोहोरी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धीको रुपमा सहभागी भए यसरी विस्तारै गायन क्षेत्रमा नै रुचि बढ्दै गयो र ख्याल ख्यालैमा गायन पेश एउटा अभिन्न अंगको रुपमा अगाडी बढ्यो र यसैलाई रुची र पेशाको रुपमा अगाडी बढाई रहेको छु । २०६१ साल तिर नक्कले पूर्वेली कान्छा लोकदोहोरी गीत रेकर्डिङ भयो । त्यस पछि लगभग १० वर्ष पछि २०७१ सालमा तिज गीत यो सालको तिजमा नाँच्ने हो मज्जैले भन्ने बोलको गित सार्वजनिक भयो र हालसम्म २०÷२५ वटा गीतहरु बजारमा ल्याउन सके ।
० पहिलेको भन्दा अहिलेको गित संगीतमा धेरै विकृति आएको होइन ?
अहिलेको गीतसंगीतमा केही विकृति आएको पक्कै हो । विशेष गरी लोक गीत संगीतमा गीत संगीतले समाजलाई र नयाँ पिढिलार्य छिटो प्रभाव पार्दथ त्यसैले बजारमा आउने यस्ता गीतहरुले नकारात्मक प्रभाव मानिसमा परी रहेको यसले लोक संगीतको गरिमालाई निकै असर पारि रहेको छ । गीत संगीतको आधिकारीक अधिकार सम्बन्धमा पनि अझै प्रष्ट कानूनको अभावले गर्दा समेत पुराना गीत संगीतको धुन र लयलाई चोरी गरी विभिन्न गीतहरु बजारमा आएका छन् जसले गर्दा त्यस्ता कालजयी लोक गीत संगीतको लोकप्रियतामा समेत असर पारी रहेको छ । तसर्थ यस्ता लोक संगीतको आधिकारिकता सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान समेत हुने जरुरी छ यसो भन्दैमा नयाँ आएका गीत संगीतहरु कर्णप्रिय मर्म स्पर्सी भने पक्कै नभएको भने होइन। यस विचमा धेरै राम्रा गीतहरुले लोक संगीतको ईतिहास रच्न सफल भएका छन् जुन कालजयी निरन्तर रहने छन् ।
० कलाकारिता क्षेत्रमा किन एक कलाकारले अर्को कलाकारलाई सम्मान गरेको पाइदैन भन्ने सुन्नमा आएका छन्, यसमा तपाईको केही भन्नु छ कि ?
कलाकारिता क्षत्र एक संवेदनशिल क्षेत्र हो जहाँ एक अर्काले एकआपसमा सम्मान, सहयोग, सद्भाव राख्दै यो क्षेत्रलाई मात्र नभै यस क्षत्रमा लागेका सबै कलाकारलाई अगाडी बढाउनु सक्नु पर्छ अनि मात्र यसले सफलता पाउँछ र यसमा लागेका व्यक्तिहरुले पनि सम्मान पाउन सक्छ तसर्थ यस क्षेत्रमा आउनु भन्दा पहिला आफूमा रहेको क्षमताले मात्र पुग्दैन यसका साथ साथै आफूले यो पेशालाई पनि मन देखी स्वीकार्य बनाउनु पर्नेछ । एक कलाकारले अर्को कलाकारलाई सम्मान गर्नु पर्दछ जहाँ सम्म एकले अर्कोलाई सम्मान नगर्ने होच्याउने प्रवृति छ यस क्षेत्रमा कोही कोहीमा नभएको भने हैन । सायद उनीहरुले आफूले जाने बुझेका कुराहरु एक आपसमा आदन प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ नकि जानेका बुझेकाले नयाँ आगन्तुक वा जो कोही कलाकारलाई हेप्ने माध्यम हुनु हुदैन साथ साथै १, २ वटौ म्यूजिक भिडियो वा गीत बजारमा आउने वित्तिकै अन्य कलाकारहरु भन्दा आफू निकै सफल हुँ भन्ने दृष्टिकोण राखी व्यवहार गर्ने गर्दछन् त्यस्ता कलाकारहरुले आफ्नो धरातल वा संघर्ष विर्सनु हुदैन वा तेज देखाउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ बाँकि उहाँहरुले जस्तो व्यवहार देखाउनु हुन्छ त्यस्तै व्यवहार अरुबाट पनि पाउन सक्छ तसर्थ सबै कलाकारहरुले एकले अर्कालाई सम्मान गर्नु पर्दछ । यसैमा सिंगो कलाकारिता पेशाको सम्मान बढ्नेछ ।
० तपाईले गाउनु भएको सबै भन्दा चर्तित गीत कुन हो रु किन त्यो गीता दर्शक श्रोताको मनछुन सफल भयो ?
मैले गाएका प्रायः सबै गीत मन पराईदिनु भएको छ । गाएका मध्ये
घरझगडा भाग २ र भाग ३ दर्शक श्रोताले धेरै मन पराई दिनु भएको छ । समसामयिक विषय वस्तुलाई समेटेर बनाइएकोले होला सायद स्टेज कार्यक्रमहरुमा चाही माया प्रिति लाउछु, काभ्रे जिल्ला घर, लोकदोहोरी गीत अनि यो सालको तीज बबाल, कौरा गीत बढी मन पराउनु भएको मैले पाएको छु ।
० अहिले सम्म कति गीत गाउनु भयो ?
त्यस्तो धेरै त गायको छैन हाल सम्म २०।२२ वटा जति बजारमा आएको छ । मैले गाएका गीतहरु ४।५ वटा आउन बाँकी छ । रेकर्डिङ सम्पन्न भएको छ
० कस्तो खालको गीत बढी गाउनु हुन्छ ?
प्रायः सबै खाले गीतहरु गाएकी छु । विशेषगरी लोकदोहोरी र तिज गीतहरु चाहि बजारमा धेरै आएका छ ।
गायनबाट सन्तुष्ट नै छु किनकी यो मेरो रुचीको कुरा भएर पनि होला । विरामी भइरहेको समयमा पनि उठेर गीत गाउन पुगेको हुन्छु । जेहोस्एउटा शक्ति छ गीत संगीतमा ।
० गायनबाट बाँच्न सकिन्छ ?
गायनबाट बाँच्न सकिन्छ तर हाम्रो देशमा कलाकारलाई त्यति सजिलो छैन राज्यबाट कुनै वास्था छैन । थोरैले यसै पेशाबाट बाँचेका छन् आफ्नो परिवार पाल्न सकेका छ तर धेरैले दुःख मात्र गरेका छन् । विभिन्न लोकदोहोरी साँझ, स्टेज कार्यक्रम, रोयाल्टी, कलाकारलाई
बाँच्ने आधार छन्।
० कस्को प्रेरणाबाट गायन क्षेत्रमा लाग्नु भयो ?
साथीभाई र घर परिवारको प्रेरणाबाट गायन क्षेत्रमा लागेकी हुँ ।
० कस्तो गागिका बन्न मन छ ?
मलाई लोक गायिका भनेर सबैले चिन्न थालिसक्नु भएको छ । म सबैको मनमुटुमा बस्ने लोक प्रिय गायिका बन्न चाहन्छु ii।
० लोक गीत कस्तो होस जस्तो लाग्छ ?
लोक गीत विशुद्ध मौलिक लोक सस्कृति झल्किने गति हुनु पर्दछ ।
त्यस्तो खासै योजना त छैन तर पनि अब छिट्टै ४।५ वटा गीतहरु बजारमा आउने तयारीमा छन्र नयाँ गीतसंगीतहरु लिएर आउने योजनामा छु ।
० पूर्व विशोष् गीत कि अरु गीत ठीक ?
नेपाली सस्कृति विशाल छ । त्यसैले पर्व, मेला, जात्रा, अनि समसामायिक विषयमा पनि गीत संगीत आउनु पर्छ र आइरहेका छन् । मैले पनि तीज पर्वमा तीज गीत, दशै गीत आदि गाएकी छु तर पर्व गीत समय सिमित हुन्छ त्यसैले अरु गीत चाही सदावाहार हुन्छन्। सबै ठीक लाग्छ ।
० अब नयाँ आउने कालकारलाई तपाई के सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?
अब नयाँ आउने कलाकारलाई उहाँहरुका कला, गला र क्षमतालाई कदर गर्दै स्वागत गर्दछु तर कलाकारितका क्षेत्र बाहिर देखे जस्तो सजिलो छैन । एउटै गीत निकालेर महत्वकाँक्षी नबनौ यसलाई निरन्तर रुपमा साधना, धैर्यताका साथ आफ्नो कला र क्षमतालाई प्रस्तुत गरौं, नयाँलाई प्रोत्साहन र पुरानालाई सम्मान दिऊ केही सिकेर बुझेर लाग्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।
जीवन गीत हो । जीवन संगीत हो । यसलाई एउटा राम्रो धुन ले सजाउन सके निकै सफल बन्छ जीवन । अझै त्यसमा रसिला शब्द राख्दा झन नै सुनमा सुगन्ध हुन्छ । मिठो र रमाईलो
हुन्छ । यसरी नै म संगीत मार्फत जीवनलाई अथ्र्याउन मनपराउछु ।
मलाई गीत संगीत क्षेत्रमा माया गरि साथ दिनुहुने सम्पूर्ण संगीत प्रेमी भगवान रुपी दर्शक श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । गीत संगीतलाई माया गरिदिनु होला । अझै आफ्नै मौलिक लोक गीत, लोक दोहोरी गीत, जुन हाम्रो पहिचान हो । हाम्रो मौलिक सस्कृति हो । त्यसलाई सबैले माया गरिदिनु होला । सम्पूर्ण कलाप्रेमीलाइै र मेरा विचारहरु राख्न सहयोग गर्नृुहुने पत्रकार अरविन्द गौतमलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । धन्यवाद, जय गीत जय संगीत ।